स्थानीय तहको बर्गीकरण : बाँकेका स्थानीय तह कुन बर्गमा परे ? - Arthapage
स्थानीय तहको बर्गीकरण : बाँकेका स्थानीय तह कुन बर्गमा परे ?
प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७५, शुक्रबार १६:१२ January 11, 2019
बाँके : सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो । विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका समेत बनिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ । स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
सबै स्थानीय तहलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ । अति नै दुर्गमलाई क, दुर्गमलाई ख, मध्यम ग र सुगमलाई घ वर्गमा राखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका घ बर्ग अर्थात सुगममा परेको छ । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिका पनि घ बर्गमै परेको
छ । खजुरा, जानकी, डुडुवा, राप्तीसोनारी,बेजनाथ गाउँपालिका ग बर्ग अर्था मध्ययममा परेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिका भने ख अर्थात दुर्गममा परेको छ ।
प्रकाशित मितिः २७ पुष २०७५, शुक्रबार १६:१२ |
Prevहिमालको भुटेको मकैदेखि फापरको मिठोसम्म पाईन्छ नेपालगन्जमै
Nextमहङ्गोमा बिक्छ घोङी